Ireo legioma sy voankazo 3 ampiarahana, mamotika tavy!
Paipaika 12 mampihena, tsy mila « régime »
Tsy te-hanao régime sady tsy te-hanao spaoro kanefa te-hihena. Azo hatao tokoa. Tsy maintsy misy kosa ny fitsipika sy fepetra arahina amin’ny andavan’andro :
Very 1 kilao ao anaty torimaso : ny atao
Amin’ny ankapobeny dia tokony ho very 400 grama ka hatramin’ny 1 kilao ny vatana mandritra ny alina. Araka izany, mety hanampy anao hihena haingana kokoa ny matory tsara. Misy ihany anefa ny fepetra hahatongavana amin’izany. Ireto avy izy ireo :
Jus baranjely 3 vera isan’androdia mihena
Mety efa renao ihany fa manafisa-kibo ny baranjely. Misy ihany ny tsara ho fantatra ny amin’ny fomba fampiasana azy. Tsy ny kibo ihany no ho fisaka fa ny vatana manontolo mihitsy no mihena sady hihasalama ny taova ao anaty raha voahaja tsara izany.
Manafaingana ny fampihenan-tena amin’ny tantely sy voasarimakirana Ny fomba tena mety hahazoana vokatra
Teboka roa tena tsy azo hiodivirana rehefa te-hampihena tena ny misakafo voalanjalanja sady manao fampihetseham-batana.
“Acupuncture” mampahia, tena mandaitra!
Teknika efa misy eto amintsika ny fampiasana ny otra hampihenan-tena. Anisan’ny somary vaovao kosa ny fampiasana ny teknikan’ny “acupuncture”. Anisan’ny mampihatra izany ny “La Thérapie Madagascar” izay etsy amin’ny Zoom Ankorondrano. Ireo tsara ho fantatra :
Paipaika hafakely 4 mampihena
Raha efa nataonao ny fomba mahazatra rehetra hampihenan-tena kanefa tsy nandaitra taminao izy dia andramo indray ireto manaraka ireto. Hafakely tokoa kanefa voaporofon'ireo siantifika fa mandaitra izy ireo :
Mampihena tena amin’ny yaourt Sakafo karazany 4 azo atao
Manahiran-tsaina tokoa indraindray ny mitady izay sakafo hohanina kanefa tsy mampatavy. Tsy mety koa ny mampijaly tena.
Raha tsy manan-kevitra ianao ny amin’ireo voankazo sy legioma tsara ampiarahina hanaovana “smoothie” dia atoronay anao ireto karazany roa ireto, izay mora mampihena tokoa noho ireo tombontsoa azo avy amin’ireo akora mandrafitra azy.
Paoma, kaokaombra sy sakamalaho
Akora ilaina : Paoma 1, kaokaombra 1, sakamalaho 40g.
Fikarakarana : Diovina tsara ny paoma ary tsy voasana. Voasana kosa ny kaokaombra sy ny sakamalaho. Tetehina madinika ny sakamalaho dia arotsaka ao anaty rano 250 ml vao mangotraka. Alefa ao anaty “mixeur” ny paoma sy kaokaombra voatetika madinika. Alefa ao koa ny ranona sakamalaho miaraka amin’ireo sakamalaho dia totoina ny fangaro. Tsy tantavanina akory fa sotroina amin’izao na dia somary misy faikany aza noho ireo hodi-paoma. Ao anatin’ny hoditry ny paoma rahateo no tena ahitana ilay “fibres” “pectine” betsaka.
Tombony azo :
Be “fibres”, “flavonoines” ary vitamina C ny paoma. Sady mandrindra ny tahan’ny siramamy ao anaty rà ny paoma no mandrisika ny metabolisma hiasa tsara. Mahavoky be rahateo izy noho ny fiasan’ny “pectin”. Be rano sady be mpanala arafesina kosa ny kaokaombra. Manana fahafahana manavao ny sela ao anaty izy sady manamandina ny ao anaty no mahavoky ihany koa. Raha ireo roa ireo no ampiarahana amin’ny sakamalaho dia vao mainka mitombo be ny fahafahany mandoro tavy. Sotroina amin’ny vao maraina raha mbola tsy misy na inona na inona ao anaty vavony.
Karaoty, voasary ary persily
Akora ilaina : Karaoty 2, voasary 2, rano 250 ml, persily iray fehezany, vaingana lagilasy
Fikarakarana : Alaina ranony ny voasary roa dia atao ao anaty “mixeur” miaraka amin’ireo karaoty voadio sy voavaofy sady voatetika madinika. Alefa ao koa ny persily efa voatango. Tapohina rano 250 ml. Sotroina mangatsiatsiaka tsara. Azo ampiana vaingana lagilasy rehefa mitoto azy. Azo sotroina amin’ny maraina na ampiarahina ny sakafo antoandro.
Mandrindra ny fandevonan-kanina ny voasary ka misoroka ny mitohana sy ny fiandronan’ny rano ao anaty. Torak’izany koa ny karaoty izay be fibres sy vitamina A ary potasioma. Ampiarahina amin’ny persily izy ireo dia hampihena tokoa satria ho voadio ny ao anaty, tsy mitohana mihitsy sady ho afaka ny “cellulite” izay vokatry ny fiandronan’ny rano ao anaty koa.